Umthetho omusha we-EU uzovimbela izivakashi ezingagonyiwe ezivela ngaphandle kwe-bloc
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Ezintsha zaseYurophu » Umthetho omusha we-EU uzovimbela izivakashi ezingagonyiwe ezivela ngaphandle kwe-bloc
Airlines • Airport • zezindiza • Izindaba Ezintsha zaseYurophu • Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba Ngebhizinisi • Izindaba zikaHulumeni • Health News • Industry Hospitality Industry • Amahhotela nezindawo zokungcebeleka • Izindaba • Abantu • Ukwakha kabusha • Unomthwalo wemfanelo • Ukuphepha • Ezokuvakasha • Transportation • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba • Izindaba Zocingo Lokuhamba • ezithrendayo Manje
The IKhomishini yaseYurophu (EC), igatsha eliphezulu le iyuniyani yase-Europe, ikhiphe isiphakamiso namuhla, incoma ukuthi wonke amazwe angamalungu e-UE avumele kuphela izihambi ezigonyiwe, ezitholiwe, noma ezibalulekile (njengabashayeli bamaloli) abavela ngaphandle kwe-European bloc, kusukela ngoMashi 2022.
Abangase babe izivakashi kuzodingeka baqinisekise ukuthi bagcine ukugonywa kungakapheli izinyanga eziyisishiyagalolunye ngaphambi kokungena, umnyakazo owenza kube impoqo ukuthwebula ama-booster kubahambi abaningi.
Ngaphansi kwemithetho emisha ehlongozwayo, izivakashi zizodinga i-booster shot njalo ezinyangeni eziyisishiyagalolunye.
The EU okwamanje itusa ukuba amazwe angamalungu avumele abahambi abavela ohlwini lwamazwe angaphezudlwana kuka-20 “abanesimo esihle sezifo eziwumshayabhuqe.” Abahambi abavela kulezi zindawo - ezihlanganisa iCanada, New Zealand, kanye ne-UAE - bavunyelwe ukungena e-EU ngesitifiketi sokugoma, ubufakazi bokululama, noma ubufakazi bokuhlolwa okungenayo i-COVID-19.
Ngaphansi kwemithetho emisha, lolu hlu luzoqedwa, futhi abahambi ngabanye bavunyelwe ngokusekelwe ekugomeni kwabo noma isimo sokululama kuphela.
Njengamanje, i-European Medicines Agency (EMA) igunyaze imigomo ka-Pfizer, Moderna, AstraZeneca, kanye no-Janssen. I-Sputnik-V yaseRussia ingaphansi kokubuyekezwa yi-ejensi, njengoba kunjalo nezithombe ze-Sanofi-GSK kanye ne-Sinopharm yaseChina.
Ngaphansi kwesiphakamiso esisha, i iyuniyani yase-Europe izovumela ukungena kubahambi abagonywe ngezithombe ezigunyazwe i-World Health Organization (WHO), kodwa hhayi i-EMA. Lokhu kuzosula noma ubani ojaywe nge-SInopharm, i-Sinovac, kanye nemithi yokugoma emibili eyenziwe e-India ukuthi angene, inqobo nje uma ezohlinzeka ngomphumela wokuhlolwa ongemuhle kanye nobufakazi bokugoma.
Mayelana ne-67% EU izakhamizi njengamanje zigonyelwe i-COVID-19, yize amazwe ngamanye ebone amazinga ahlukene okuthathwa kwawo.
Kodwa-ke, nase-Ireland, enezinga eliphezulu lokugoma ku-bloc ngama-93%, amacala amasha aleli gciwane aphindeke kathathu kusukela ekuqaleni kuka-Okthoba, futhi uhulumeni wase-Ireland ucubungula imikhawulo emisha empilweni yansuku zonke.
"Kusobala ukuthi lolu bhubhane alukapheli," kusho uKhomishana waseYurophu uDidier Reynders ngoLwesine, wengeza ngokuthi "imithetho yokuhamba idinga ukubheka lesi simo esishubile."